ဒေတာအကာအကွယ်ကြေငြာချက် - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း
Worldwide Church of God (WKG Switzerland) သည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အလွန်အလေးအနက်ထားကာကွယ်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ထားပြီး ပြဌာန်းထားသောဒေတာကာကွယ်ရေးစည်းမျဉ်းများနှင့် ဤဒေတာကာကွယ်မှုကြေငြာချက်နှင့်အညီ ဆက်ဆံပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဒေတာစုဆောင်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းကို သင်သဘောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဆွစ်ဇာလန်ဒေတာစင်တာတွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သည် အများအားဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မပေးဘဲ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ခြွင်းချက်များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို သဘာဝအတိုင်း လိုအပ်သည့် ဧရိယာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ မှာယူမှုများ)။ အဆိုပါကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အော်ပရေတာမှသတ်မှတ်ထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ အသုံးပြုပြီး သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်၏အကြောင်းအရာမှရရှိလာကာ သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ပေးပို့မည်မဟုတ်ပါ။
ကျနော်တို့အင်တာနက်ကိုကျော်ဒေတာဂီယာ (က e-mail ဖြင့်ဥပမာဆက်သွယ်ရေး) လုံခြုံရေးကွာဟချက်ရှိသည်နိုင်ကြောင်းထောက်ပြနေသည်။ တတိယပါတီ access ကိုဆန့်ကျင်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်က cookies လို့ခေါ်တယ်။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန်၊ ပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်ပိုမိုလုံခြုံစေရန်ပြုလုပ်သည်။ ကွတ်ကီးများသည်သင်၏သေးငယ်သည့်စာသားဖိုင်များဖြစ်ပြီးသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းပြီးသင်၏ဘရောက်ဇာမှသိမ်းဆည်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော cookies အများစုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတရားဝင်ပြီးသင်မဖျက်မှီတိုင်အောင်သင်၏စက်ပေါ်တွင်သိမ်းထားသည်။ ထို cookies များသည်ဥပမာအားဖြင့်သင်ပြုလုပ်ထားသည့် setting များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အသုံးပြုသူပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ cookies ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကိုအကြောင်းကြားရန်နှင့်ကိစ္စရပ်များအတွက် cookies များကိုခွင့်ပြုရန်၊ အချို့သောကိစ္စရပ်များအတွက်သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့် cookies များကိုလက်ခံခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်နှင့် browser ကိုပိတ်လိုက်သောအခါ cookies များကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ခြင်းကိုသက်ဝင်စေရန်သင် browser ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ cookies များကိုပိတ်ထားပါကဤ website ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်၏ပံ့ပိုးပေးသူကသတင်းအချက်အလက်များကိုဆာဗာမှတ်တမ်းဖိုင်များဟုအလိုအလျောက်စုဆောင်းသိုလှောင်သည်။ သင်၏ဘရောက်ဇာသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံအလိုအလျောက်ပို့ပေးသည်။ ဤရွေ့ကား:
နေ့စွဲ / အချိန်
တစ်ပတ်အကြာတွင်ဝက်ဘ်ဆာဗာမှဤအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားမ ၀ င်အသုံးပြုမှုအတွက်တိကျသောလက္ခဏာများကိုသတိပြုမိပါကဤအချက်အလက်များကိုနောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
သင်အဆက်အသွယ်ပုံစံကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ခဲ့လျှင်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်တောင်းဆိုချက် processing အဘို့နှင့်ငါတို့နှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများကို၏ဖြစ်ရပ်ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ကိုသတ်မှတ်အပါအဝင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံကနေသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုတောင်းဆို။ ဒီ data ပေါ်တွင်သင်၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲထုတ်ဖော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အောက်ပါအချက်အလက်များကို Matomo ၏ဘောင်အတွင်းတွင်စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားသည်။
တောင်းဆိုနေသည့် ကွန်ပျူတာ၏ IP လိပ်စာ (သိုလှောင်မှုမတိုင်မီ အမည်မသိ)
ဝင်ရောက်အသုံးပြုခဲ့သည့် ဝဘ်ဆိုဒ် (ကိုးကား URL)
ထုတ်ယူဖိုင်၏အမည်နှင့် URL ကို
အသုံးပြုထားသော browser (အမျိုးအစား၊ ဗားရှင်းနှင့် ဘာသာစကား)၊
ကွန်ပျူတာ၏ operating system ကို
Matomo သည်အသုံးပြုသူ၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောကွတ်ကီးများကိုအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူမှကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစေသည်။ ကလောင်အမည်အသုံးပြုသူကိုယ်ရေးအချက်အလက်လုပ်ငန်းများ၌ဒေတာမှဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ကွတ်ကီးများတွင်တစ်ပတ်ထားသိုထားနိုင်သည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သော cookie မှထုတ်လုပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာတွင်သာသိမ်းဆည်းထားပြီးတတိယပါတီများသို့ပေးပို့ခြင်းမပြုပါ။
အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအနာဂတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအမည်မသိအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းကို Matomo အစီအစဉ်မှကန့်ကွက်နိုင်သည်။
ဤ site ကို Google ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ဖောင့်လို့ခေါ်က်ဘ် Fonts ၏ယူနီဖောင်းအသွင်အပြင်ကိုအသုံးပြုသည်။ စာမျက်နှာသင်၏ browser ဟာသူတို့ရဲ့ဘရောက်ဇာကို cache ထဲတွင်လိုအပ်သောက်ဘ် Fonts ဝန်မှန်ကန်စွာစာသားနဲ့ဖောင့်ပြသရန်အခါ။
သငျသညျ Google ရဲ့ဆာဗာကိုအသုံးပြု browser ကိုဆက်သွယ်မှုသည်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့ကိုလက်ခံရပေမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်, Google ကသင်၏ IP လိပ်စာကိုမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုခေါ်ခဲ့အသိပညာရရှိခဲ့သည်။ Google Web Fonts များအသုံးပြုမှုယူနီဖောင်းများ၏အကျိုးစီးပွား၌ပြစ်မှားမိနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းမှု၏တင်ဆက်မှုဆွဲဆောင်။ ဒါဟာအနုပညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွင်းတရားဝင်အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြုသည်။6မသန်စွမ်း။ 1 များမှာfDSGVO ကိုယ်စားပြုတယ်။
သင့် browser ကို web ဖောင့်ကိုထောကျပံ့မပါဘူးဆိုရင်, တစ်ဦးက default font ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
Google Web Fonts အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကတွေ့ https://developers.google.com/fonts/faq နှင့် Google ၏ privacy ကိုမူဝါဒ: https://www.google.com/policies/privacy
ဒီ site သည်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက် SSL encryption ကိုအသုံးပြုပြီးလျှို့ဝှက်ထားသည့်အချက်အလက်များကိုလွှင့်ထုတ်ခြင်းကိုကာကွယ်သည်။ browser ၏လိပ်စာသည်“ http: //” မှ“ https: //” သို့“ သင်၏ browser လိုင်းရှိသော့ခလောက်သင်္ကေတ” သို့ပြောင်းလဲသောကြောင့်စာဝှက်ထားသောဆက်သွယ်မှုကိုသင်အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ SSL encryption ကိုသက်ဝင်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့ထံသို့သင်ပို့လွှတ်သောအချက်အလက်များကို third party များမှဖတ်။ မရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site သည် "Google ဝဘ်ဆိုဒ်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ" ကိုအသုံးပြုသည်။ ပံ့ပိုးပေးသူမှာ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေထားသော ဝေါဟာရများကို ဖြစ်နိုင်သောရလဒ်များထွက်ပေါ်စေရန်အတွက် ဖောင်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဒေတာဘေ့စ်သို့ ပေးပို့ပါသည်။ သို့သော်၊ ရှာဖွေမှုစာရင်းအင်းများ (ဘယ်သူ၊ ဘယ်အချိန်၊ ရှာဖွေခဲ့သည်) ကို ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါ။
ဘရောက်ဇာကို plugin ကို
သင့်ဘရောက်ဆာဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် cookies များသိုလှောင်မှုကို တားဆီးနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ ဤကိစ္စတွင် သင်သည် ဤဝဘ်ဆိုဒ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ၎င်းတို့၏ အတိုင်းအတာအထိ အပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ပြလိုပါသည်။ ကွက်ကီးမှထုတ်ပေးသော ဒေတာကို Google မှ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ဝဘ်ဆိုက်အသုံးပြုခြင်း (သင်၏ IP လိပ်စာ အပါအဝင်) နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အောက်ပါလင့်ခ်အောက်တွင် ရရှိနိုင်သော ဘရောက်ဆာ plug-in ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဤဒေတာကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမှလည်း တားဆီးနိုင်ပါသည်။ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းချက်အတွင်း ပြင်ပမှပံ့ပိုးပေးသူများထံမှ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းချက်များကို အသုံးပြုပါသည် (ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းချက်၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်မှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု။6Para. 1 lit။ ပေါင်းစပ်ပါ ဗီဒီယိုများ သို့မဟုတ် ဖောင့်များကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ယခုနောက်ပိုင်းတွင် "အကြောင်းအရာ" ဟု တစ်ပုံစံတည်းရည်ညွှန်းသည်)။ IP လိပ်စာမပါဘဲ အကြောင်းအရာကို ၎င်းတို့၏ဘရောက်ဆာထံ ပေးပို့နိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် ဤအကြောင်းအရာ၏ ပြင်ပမှပံ့ပိုးပေးသူများသည် အသုံးပြုသူများ၏ IP လိပ်စာကို ရိပ်မိသည်ဟု အမြဲတမ်းယူဆပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအကြောင်းအရာကိုပြသရန် IP လိပ်စာ လိုအပ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ အကြောင်းအရာကို ပေးပို့ရန်အတွက် IP လိပ်စာကိုသာ အသုံးပြုသည့် အကြောင်းအရာကိုသာ အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးပမ်းပါသည်။ ပြင်ပမှပံ့ပိုးပေးသူများသည် ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မမြင်နိုင်သောဂရပ်ဖစ်များ (မမြင်နိုင်သောဂရပ်ဖစ်များဟုလည်းခေါ်သော "ဝဘ်ဘီကွန်များ") ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤဝဘ်ဆိုက်၏စာမျက်နှာများရှိ ဧည့်သည်အသွားအလာများကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို အကဲဖြတ်ရန် «pixel tags» ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အမည်ဝှက်အချက်အလက်ကို အသုံးပြုသူ၏စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ ကွတ်ကီးများတွင်လည်း သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး၊ ဘရောက်ဆာနှင့် လည်ပတ်မှုစနစ်အကြောင်း နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ဝဘ်ဆိုက်များကို ရည်ညွှန်းခြင်း၊ လာရောက်လည်ပတ်ချိန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းချက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သော အခြားအချက်အလက်များပါရှိပြီး လင့်ခ်ချိတ်နိုင်သည်။ အခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှ ထိုသို့သော အချက်အလက်များကို
Art. 32 GDPR အရ အနုပညာအခြေအနေ၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် အမျိုးအစား၊ နယ်ပယ်၊ အခြေအနေများနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်များအပြင် အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များအတွက် စွန့်စားရနိုင်ခြေ၏ ကွဲပြားနိုင်ခြေနှင့် ပြင်းထန်မှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အန္တရာယ်နှင့် သင့်လျော်သော ကာကွယ်မှုအဆင့်ကို သေချာစေရန် သင့်လျော်သော နည်းပညာနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအမံများကို ပြုလုပ်ပါသည်။ အစီအမံများတွင် အထူးသဖြင့် ဒေတာရယူခွင့်၊ ထည့်သွင်းမှု၊ လွှဲပြောင်းမှု၊ ရရှိနိုင်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏ခွဲခြားမှုကို သေချာစေခြင်းဖြင့် ဒေတာရရှိနိုင်မှုတို့ကို လုံခြုံစေခြင်း၊ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေတာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးခြင်း၊ ဒေတာဖျက်ခြင်းနှင့် ဒေတာခြိမ်းခြောက်မှုများကို တုံ့ပြန်ခြင်းတို့ကို အာမခံသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းပညာဒီဇိုင်းနှင့် ဒေတာကာကွယ်မှု-ဖော်ရွေသော ပုံသေဆက်တင်များမှတစ်ဆင့် ဒေတာကာကွယ်မှုနိယာမနှင့်အညီ ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ခြင်းကာလအတွင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကာကွယ်ရေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဒေတာကာကွယ်ရေးကြေငြာချက်အားအခါအားလျော်စွာညှိနှိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ သို့မှသာ၎င်းသည်လက်ရှိဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အမြဲတမ်းကိုက်ညီစေရန်သို့မဟုတ်ဥပမာအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းကြေငြာချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပြောင်းလဲခြင်းများကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ န်ဆောင်မှုအသစ်များမိတ်ဆက်အခါခ။ အသစ်သောအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးကြေငြာချက်သည်နောက်တစ်ကြိမ်သင်၏လည်ပတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
မင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကငါတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မေးခွန်းများကိုအချိန်မရွေးဖြေဆိုနိုင်စေချင်ပါသည်။ သင့်တွင်ဤအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းကြေငြာချက်ကမဖြေနိုင်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်မည်သည့်အချက်နှင့်မဆိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသင်လိုချင်ပါကအချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ရင်းမြစ် - ဤအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးကြေငြာချက်၏အစိတ်အပိုင်းများမှလာသည် e-recht24.de
E-Mail က: info@wkg-ch.org